Fandefasana an’i Claudine R. tatsy Maorisy: mpandraharaha fonja 24 tokony hakarina fampanoavana | NewsMada
Mby aiza ny “Raharaha Razaimamonjy Claudine”? Na ny amin’ny fandefasana azy hitsabo teny tatsy amin’ny Nosy Maorisy ihany aza… Mpandraharaha fonja 24 tokony hakarina fampanoavana. Manome fanazavana ny Bianco sy ny Pac…
Mpandraharaha fonja 24 tokony ho nakarina fampanoavana, ny fiandohan’ny herinandro teo. Voasaringotry ny “Raharaha Razaimamonjy Claudine”izy ireo ny amaay nandefsa azy hitsabo tany any ivelany. Nihetsika ka naneho hevitra avy hatrany ny sendikà. Mpanatanteraka baiko amin’ny asany ihany izy ireo… Manoloana izany, naneho ny heviny koa ny eo anivon’ny Bianco sy ny Pac.
“Misy zavatra amin’ny fomba fisainana tsy eritreretintsika tomponandraiki-panjakana tokony ho efa ovaina. Ahoana moa ny azo ieritreretana fa misy tomponandraiki-panjakana iray manatanteraka izay zavatra tsy mifanaraka amin’ny lalàna ampanaovina azy?”
Io ny nambaran’ny tale jeneralin’ny Bianco, Andriamifidy Jean-Louis, teny Ambohibao, omaly, momba izay hoe fanatanterahana baiko ny nataon’ny mpandraharaha fonja tamin’ny fandefasana an-dRazaimamonjy Claudine hitsabo tena tany ivelany izay.
Raha ohatra tafahoatra no raisina hoe andeha mangalatra, dia mangalatra… Nefa avy eo, rehefa tratra ny raharaha: ny tena nangalatra sy namaky tranon’olona no hitan’ny fanjakana sy ho tratran’ny fanenjehana voalohany, izay vao ny olona naniraka ny tena.
Tokony samy ho mailo amin’izay mety ho tsy ara-drariny ampanaovina ny tena ny tsirairay fa tokony handa ankitsirano. Misy ny rafitra hahazoana mitondra ny fitarainana sy ny mampahafantatra ny tsy rariny mahazo ny tena amin’izany, araka ny nambarany.
Manana sata manokana ny mpandraharaha fonja
Mitovy amin’ny olona rehetra ihany ny mpandraharaha fonja amin’ny famotorana ataon’ny Bianco, na manana ny sata manokana aza izy ireo. Rehefa any amin’ny fanenjehana izy ireo vao afa-mampiseho an’izay, araka ny fanazavany. Rehefa vita ny famotorana ka mandefa ny raharaha any amin’ny fitsarana manokana misahana ny kolikoly (Pac) ny Bianco, ny Pac no manao ny fanenjehana.
Naninona no nahemotra ny fanolorana ny raharaha any amin’ny fitsarana? Satria nisy mpandraharaha fonja voarohirohy amin’ny raharaha iny, araka ny fanazavan’ny tonia voalohany mpampanoa, Razafindrakoto Solofohery. Tsy maintsy misy ny fangatahana mialoha any amin’ny minisiteran’ny Fitsarana ny fahazoana manenjika azy ireo, araka ny sata mifehy ny mpandraharaha fonja. Mivaly izay vao azo, vao azo akarina fitsarana ny raharaha.
Miandry ny fijoroan’ny Antenimierampirenena ny HCJ
“Mety ho gaga isika hoe: maninona no tsy mbola misy raharaha famotorana ao amin’ny Fitsarana avo (HCJ amin’izao fotoana izao?”, hoy izy. Maro ny mpikambana ao amin’ny HCJ, ary misy avy amin’ny Antenimierampirenena. Amin’izao fotoana izao, atao ny fifidianana solombavambahoaka ho mpikambana amin’izany. Andrasana ny ho mpikambana vaovao ho ao amin’ny HCJ amin’izany. Hakambana ireo raharaha mahakasika ireo mitondra ambony, ary entina hotsaraina ao amin’ny HCJ.